Ndosiya Chikoro Here? | Vechidiki Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Bassa (Cameroon) Bislama Catalan Cebuano Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Croatian Czech Danish Dutch Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabuverdianu Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Ossetian Pangasinan Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tarascan Tatar Thai Turkish Turkmen Twi Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndosiya Chikoro Here?
“Chikoro chava kundibhowa!” Kana ariwo manzwiro auri kuita, unogona kupindwa nepfungwa yekusiya chikoro. Nyaya ino ichakupa mazano anogona kukubatsira.
Nei vamwe vachisiya chikoro?
Tanga wafunga zvinogona kuzoitika
Zvimwe zvikonzero zvacho ndeizvi:
Kuomerwa nechikoro. ‘Ndiri kuramba ndichingofoira.’
Kusafarira chikoro. ‘Handioni chikonzero chekuendera kuchikoro.’
Kushaya mari. ‘Ndiri kuda kusiya chikoro kuti nditsvage mari yekubatsira vanhu vekumba kwedu kuti vawane chekurarama nacho.’
Bhaibheri rinoti: “Munhu ane njere anofungisisa nhanho imwe neimwe.” ( Zvirevo 14:15) Zvinorevei? Kana uchifunga kusiya chikoro, unofanira kuziva zvinogona kuzoitika.
‘Kana ndikasiya chikoro ndichakwanisa kuzowana basa zviri nyore here?’
“Ziva kuti zvichida rimwe zuva uchafanira kutsvaga basa kuti uzoriritirawo mhuri yako. Saka unozokwanisa kuwana basa here kana usina kupedza chikoro?”—Julia.
‘Ndikasiya chikoro ndinozokwanisa here kukunda matambudziko andinozosangana nawo?’
“Chikoro chinokubatsira kuti ugadziririre ramangwana rako. Zvinhu zvakawanda zvauchasangana nazvo mune ramangwana, uchaona kuti zvakangofanana nezvawaisangana nazvo kuchikoro.”—Daniel.
‘Ndikasiya chikoro ndichazokwanisa here kuva neunyanzvi hunodiwa kana ndava munhu mukuru?’
“Iye zvino ungaona sekuti chikoro hachina zvachinobatsira, asi uchazoona kuti paunenge wava nemakore 23, unenge waakufanira kuchizvibhajetera zvinhu zvako wega, uye ndipo pauchatenda kuti maths dzawaiita kuchikoro dzakakubatsira.’”—Anna.
Tsvaga anogona kukubatsira. Bhaibheri rinoti: “Panova nekubudirira kana vanhu vanopa mazano vakawanda.” (Zvirevo 11:14) Kana uri kuona kuti uri kufoira, kumbira kubatsirwa nemubereki wako, kana kuti mudzidzisi wako, kana kuti mumwe munhu mukuru waunovimba naye.
“Kumbira kubatsirwa nemudzidzisi wako. Dzimwe nguva unogona kufunga kuti ndiye ane dambudziko, asi ukataura naye anogona kutokupa mazano anokubatsira.”—Edward.
Imbofunga kuti zvauri kudzidza kuchikoro zvichakubatsira sei mune ramangwana. Bhaibheri rinoti: “Kuguma kwenyaya kuri nani kupfuura kutanga kwayo.” (Muparidzi 7:8) Pauchapedza chikoro unenge wava neunhu uye unyanzvi hunodiwa muupenyu.
“Paunenge wakura unenge usingachaiti homuweki kana kunyora mazamanishoni. Saka zvaunoita iye zvino paunosangana nezvinhu zvinokuomera kuchikoro, zvinenge zvichitokubatsira kuti ugokwanisa kukunda matambudziko auchazosangana nawo mune remangwana.”—Vera.
Kusiya chikoro kwakafanana nekubuda muchikepe chisati chamira; unozozvidemba kuti dai wakapedza hako chikoro!
Nyatsofunga zvimwe zvaungaita. Bhaibheri rinoti: “Vanhu vese vanokurumidzira zvinhu vachava varombo.” (Zvirevo 21:5) Usakurumidza kufunga kuti hapana zvekuita kunze kwekuti utosiya chikoro. Unogona kuverenga wega wozoenda kunonyora bvunzo chete.
“Chikoro chinokudzidzisa kushanda nesimba, kugadzirisa matambudziko, uye kugona kushanda nevamwe zvakanaka. Zvaunodzidza kuchikoro zvinokubatsira muupenyu hwako hwese. Saka zviri nani chaizvo kuti upedze chikoro.”—Benjamin.
Pfungwa inokosha: Pedza chikoro uye zvichakubatsira kuti ugadzirire ramangwana rako.
“Paunozotsvaga basa, makambani akawanda anoda kutora vanhu vakapedza chikoro. Kupedza chikoro chiratidzo chekuti uri munhu anokwanisa kupedza zvaanenge atanga. Saka kusiya chikoro hakubatsire.”—Annabelle.
“Kuramba uri kuchikoro kunogona kukuomera, saka unogona kuona sekuti kusiya chikoro ndokuzvigona. Asi uchaona kuti paunenge wakura uchasanga nezvimwe zvinhu muupenyu zvinokuomera uye unenge uchida kuzvigadzirisa. Saka nguva yaunopedza uri kuchikoro inenge ichitokuumba kuti ukwanise kuzova munhu mukuru anogona kugadzirisa matambudziko.”—Cole.
“Paunenge wava munhu mukuru, uchaona kuti hapana hapo pauchazonzi ita maths. Asi pane zvinhu zvaunenge uchifanira kunge uchiita, zvakadai sekuronga nguva yako, kukwanisa kupedza zvinhu nenguva, uyewo kukurumidza kumuka. Saka kuenda kuchikoro kunokubatsira kuti uve neunyanzvi hwese uhwu.”—Brynn.
Kudzokorora: Ndosiya chikoro here?
Tanga wafunga zvinogona kuzoitika. Funga kuoma kwazvinogona kuzoita kuti uwane basa, uve neunyanzvi hunodiwa pakurarama, uye ukwanise kutsungirira matambudziko auchasangana nawo.
Tsvaga anogona kukubatsira. Kana uri kuona kuti uri kufoira, kumbira kubatsirwa nemubereki wako, kana kuti mudzidzisi wako, kana kuti mumwe munhu mukuru waunovimba naye.
Imbofunga kuti zvauri kudzidza kuchikoro zvichakubatsira sei mune ramangwana. Zvaunodzidza hazvingopereri kuchikoro. Zvichakubatsirawo kuti ukwanise kuva munhu anodzidza ari ega, anokwanisa kupedza zvinhu nenguva, uye anokwanisa kuita mabasa aanenge apiwa.
Nyatsofunga zvimwe zvaungaita. Usakurumidza kufunga kuti hapana zvekuita kunze kwekuti utosiya chikoro. Unogona kuverenga wega wozoenda kunonyora bvunzo chete.
Kurega chikoro, chimbofunga zvinhu 5 zvaungaita kuti upase.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndosiya Chikoro Here?
ijwyp nyaya 102